उपयोगी सूचना, घतलाग्दा प्रसङ्ग
“प्रकाश ए.राज चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन”---संस्मरणमाला भाग-१ को प्रकाशकीयमा परेको मोहन दुवालको यो कथन सोह्रैआना साँचो हो । तर २०३३ सालमा भए यो भनाइ आठआना बराबर पनि थिएन । किनभने त्यस बखत प्रकाशको लेखन अनुभव १० वर्षको मात्र भएको थियो ।
बरु त्यसै वर्ष पौषको एकदिन भने प्रकाश ए. राजको लागि अविस्मरणीय हुन पुगेछ । पटनाबाट काठमाडौंको लागि उडेको शाही नेपाल वायुसेवा निगमको विमानका एक यात्री प्रकाश ए. राजले आफूलाई एक्कासि एक विशिष्ट यात्रीको बीचमा पाउनुभयो : बी पी कोइराला । उहाँ गणेशमान सिंह,शैलजा आचार्य खुमबहादुर खड्का र सी.के. प्रसाञीका साथ ठूलै जोखिम उठाएर नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो । लेखकले गणेशमानजीलाई त चिन्नु भएछ, तर यात्रा राष्ट्रिय मेलमिलापको नियोगसित गाँसिएको कुरो ज्ञात भएनछ ।
त्यो पौष १६ गतेको दिन थियो ।
हवाईजहाज काठमाडौं ओर्लिने बेलामा प्रकाशले आफूले लेखेको पथप्रदर्शक अङ्ग्रेजी पुस्तक ‘काठमाण्डू एण्ड किङ्डम् अफ् नेपाल’ एकप्रति उपहार दिन उपयुक्त ठान्नु भएछ । त्यस क्रममा आफ्नी पत्नीको नाम उल्लेख गर्दा बीपीले ‘पहिले नै किन नभन्नु भएको त?’ भनेर सस्नेह सोधेको प्रसङ्गको लेखकलाई पूरा हेक्का छ । पारिवारिक निकटताको सन्दर्भ थियो ।
वि.सं. १९४०—२००४ सम्ममा जन्म भएका ३० जना नेपाली व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई मात्र लेखकले यस पुस्तकमा चर्चाका पात्र बनाउनु भएको छ । यसैमा राजा वीरेन्द्र,पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र,बीपी,बालकृष्ण सम,तारानाथ शर्मा,वैरागी काइँला,सत्यमोहन जोशी,हृषीकेश शाह,हर्क गुरुङ,ऋध्दिबहादुर मल्ल,स्वामी प्रपन्नाचार्य र राममणि रिसाल समेतका नामहरू आउँछन् । लेखकले व्यक्तिगत चिनाजानी,भेटघाट भएको अथवा कुनै रचनाबाट आफू प्रभावित भएको वा आफू शिष्य भएको अथवा समाजका सम्मानित व्यक्तिहरूबाट असल नेपाली भनेर उल्लेख गरिएका सज्जनबारे आफ्नो अवधारणा प्रकट गर्नुभएको देखिन्छ । अर्थात् पुस्तकमा प्रविष्टि पाएका व्यक्तित्वबारेका मूल्याङ्कन एक स्थापित लेखकका निजी अनुभूति हुन्; पाठकले यसमा वस्तुनिष्ठता खोज्नु अनुचित हुन्छ ।
चौरान्‌नब्बे पृष्ठको यस सानो पुस्तकमा यस्ता जानकारी धेरै-धेरै पाइन्छन् जसको प्रकाशन पहिले भएको थिएन; भएकै भए पनि पर्याप्त वा विस्तृत थिएनन् । इतिहासका लेखकहरूलाई कामलाग्ने सन्दर्भ-सामग्री पुस्तकैभरि नै पाइन्छन् । किंवदन्तीकै रूपमा भएपनि नेपाली समाजले थाहा पाइराख्नुपर्ने विषय र प्रसङ्ग यत्रतत्र भेटिन्छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग लेखकले दुई पटक ‘दर्शन-भेट’ को मौका पाउनु भएको रहेछ—पहिलो चोटि २०२८ साल माघमा अधिराजकुमार छँदा (राजा महेन्द्रको निधनभन्दा केही दिनअघि) र दोस्रो पटक २०५८ सालमा राजाको रूपमा । युवराज वीरेन्द्रका माहिला भाइ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र दाजुसित मेची अञ्चलको भ्रमणमा छँदाको घटनाको वर्णन छ,एक ठाउँमा । हेलिकोप्टरबाट ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला पुगेर आएको दिन बेलुकी इलामको शिविरमा दिनभरिका घटनाको समीक्षा भ्रमणदलको सदस्य प्रकाश ए. राजले पनि सुन्न पाउनुभयो । दुर्गम जिल्लामा पुग्दा दिउँसो स्वागत गर्नेमध्ये एक स्थानीय युवतीले वीरेन्द्रलाई अङ्ग्रेजीमा ‘माई लर्ड’ बाट सम्बोधन गरेकी कुराको पनि चर्चा भएको थियो । कालान्तरमा, आफू राजा भएपछि ज्ञानेन्द्रले ती महिला याङ्किलालाई मन्त्री नियुक्ति गरेको प्रसङ्ग पनि पुस्तकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ‘काज’ मा दरबारको जाँचबुझ केन्द्रमा झिकाइएका प्रकाश ए. राजले त्यसैताका निर्मल निवासमा अधिराजकुमारसित भेट पाउनु भयो । दोस्रो पटक राजा भएपछिको दर्शन-भेटमा लेखकले साविकमा राजतन्त्र भएका देश कम्बोडिया,अफगानिस्तान र इथियोपियाहरूको इतिहास कोट्याउँदै माओवादी विद्रोहको सन्दर्भमा नेपालमा पनि गणतन्त्रको आवाज उठ्न थालेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । तर राजा ज्ञानेन्द्र ‘केही रिसाएको जस्तो लाग्यो’। भरे, २०६३ सालपछि के भयो जग-जाहेर छ ।
संयोग हो, २००७ सालमा बालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजमुकुट पहि-याउने काम बडागुरुज्यू हेरम्बराजले गरे तापनि शिरमा हल्लिएको श्रीपेच मिलाइदिने काम लेखकका हजुरबा नायव बडागुरुज्यू हेमराज पाण्डेले गर्नुभएको थियो । २०५८ सालमा फेरि राजा हुँदा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेच पहि-याउने भूमिका लेखककै पिता बडागुरुज्यू केशरीराज पाण्डेले निर्वाह गर्नुभयो ।
सम्मानित पाण्डे परिवारमा जन्म भए तापनि प्रकाशले आफ्नो नाम फेर्नुको कारण डा. रामदयाल राकेशबारेको अध्यायमा खुलाउनु भएको छ । तराईको कलवार परिवारमा जन्म भएको हिसाबले थर ‘साह’ हुनुपर्थ्यो, तर रामदयालले थरको ठाउँमा उपनाम ‘राकेश’ प्रयोग गर्नुभएछ जसको अर्थ हो चन्द्रमा । ‘म आफैं जातिसूचक नाम नलेख्ने व्यक्ति हुनाले’ भनेर लेखकले आफू र राकेशमा भएका समानताको उल्लेख गर्नुभएको छ । समानता अरू केही पक्षमा पनि रहेछन् ।
संस्मरणमाला भाग-१ मा समावेश भएका अन्य केही नाम हुन् : केशवराज पिंडाली,ज्ञानमणि नेपाल,नयराज पन्त,कीर्तिनिधि बिष्ट,कमलमणि दीक्षित र रोचक घिमिरे । लेखक एक समय अङ्ग्रेजी छापा ‘राइजिङ नेपाल’ मा कार्यरत पत्रकार भएकोले थोरै शब्दमा धेरै सूचना,जानकारी दिने कलामा सिपालु देखिनु हुन्छ । हो,सम्पादन र छपाइको क्रममा हुने त्रुटिबाट भने यो पुस्तक पनि मुक्त छैन । जस्तो,बीपी पटनाबाट नेपाल फर्केको मिति मिलेको छैन । अन्यत्र पनि कताकति पाठक अल्मलिने ठाउँ देखिन्छन् । तथापि प्रकाशकीय खण्डको बेहोरा पढदा स्पष्ट हुन्छ : ५२ वर्षको लेखन अवधिमा प्रकाश ए. राजका साना-ठूला गरेर ५४ वटा कृति प्रकाशित भैसके;वि.सं. २००० सालमा जन्मेका लेखक अहिले पनि थाक्नु भएको छैन ।
आशा गरौं,संस्मरणमाला भाग-२ छिटै पाठकसमक्ष आइपुग्नेछ ।
कृति : संस्मरणमाला भाग-१
लेखक: प्रकाश ए. राज
प्रकाशक : जनमत प्रकाशन नेपाल
संस्करण: प्रथम,२०७४ चैत्र
पृष्ठसंख्या : ९४+
मूल्य : १५० रुपिञा